Ozi nyocha | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Maka ụmụaka nọ na Afọ 1 na karịa, mgbe ị gara nzukọ nwa akwụkwọ kwa afọ, ị ga-enweta akwụkwọ nchịkọta nke nyocha ha megide Nzọụkwụ Njikọ Aka.
Iji nwetakwuo ihe ọmụma biko kpọtụrụ onye nkụzi klas gị.
Assessmentdị nyocha ndị ọzọ
Nwatakịrị ọ bụla nwere atụmatụ nkuzi nke onwe (PLP) nke onye nkuzi haziri maka ha na ndị nne na nna / ndị nlekọta na ndị ọkachamara ndị ọzọ. Nke a na-egosipụta ike nwatakịrị ahụ na nsonaazụ dị mkpirikpi na ogologo oge site na atụmatụ Nlekọta Ahụike na Nlekọta ha, na-eji isi okwu EHCP nke anyị na-eji na usoro ọmụmụ anyị. O depụtara ihe dị ka ebumnuche 5 na-arụ ọrụ maka ụfọdụ n'ime nsonaazụ ndị a na usoro mmụta anyị ga-eji.
Ndị nne na nna / ndị nlekọta na-enweta otu PLP na nwa ọ bụla ga-arụ ọrụ na ebumnuche PLP ha n'oge nkuzi na ihe omume kwa ụbọchị. Nsonaazụ PLP pụtakwara na mmemme mmemme ndị ọzọ gụnyere agụmakwụkwọ ọgbakọ ehihie, mgbe klọb ụlọ akwụkwọ na egwuregwu egwuregwu.
A na-enyocha ihe ịga nke ọma nwa gị na-emezu ebumnuche ha, ị ga-enweta PLP enyocha, yana nke ọhụrụ. A na-ahụ ndị nne na nna na ndị nlekọta dị ka ndị mmekọ dị mkpa iji mee ka nwa ha nwee ike mezuo ma nwee ọganiihu ka ha na-enye nkwado dị n'etiti ụlọ akwụkwọ na ụlọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ usoro atumatu na ndekọ ndekọ anyị biko jụọ.
Thelọ akwụkwọ ahụ na-esetịpụta nsonaazụ ụlọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị site na iji ọkwa P, nke enwere ike ịtụle inweta. A na-akọwapụta agam n’ihu n’ime ihe ndị a n’ọmụmụ ihe Kwa Afọ nke ụmụ akwụkwọ, mana enwere ike ịtụle n’oge ọ bụla.
Kedu otu esi agwa ndị nne na nna / ndị nlekọta banyere ọganihu
Emere nke a n'ọtụtụ ụzọ: mkpesa nyocha kwa afọ na nzukọ, n'ụlọ gị n'oge nleta ụlọ, ma ọ bụ n'akwụkwọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị. A na-egosikwa agam n’ihu na PLP ndị enwetara ma tụlee, ma a tụlere ya mgbe ị na-agwa onye nkuzi okwu n’ekwentị, site na email ma ọ bụ n’ụlọ akwụkwọ.
A na-edekọkwa ọganiihu ụmụaka na mmezu ha kwa ụbọchị site n'aka ndị ọrụ klaasị na ọtụtụ ihe akaebe nke ọganihu na-etinye na ndekọ Tapestry ha n'ịntanetị, yabụ enwere ike ịkekọrịta ya na ezinụlọ. Ndị nkuzi na-ebugo foto na vidiyo na nkọwa banyere ihe nwatakịrị gị rụzuru, ka ịlele ma kwuo maka ya. Nwere ike bulite foto nke gị na vidiyo nke oge pụrụ iche n'ụlọ. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịkekọrịta ihe ndị a na ibe anyị ngwa ngwa na ngwa ngwa. Nne na nna ọ bụla / onye nlekọta nwere nbanye nke ha, yabụ naanị ị nwere ike ịnweta ibe Tapestry nwa gị.
Nweta na njedebe nke EYFS: A na-enyocha ụmụ akwụkwọ niile dị ka Emerging na Profaịlụ EYFS.
Mmụta nke ụmụ akwụkwọ site na afọ 1 ruo afọ 6 - sitere na P1ii - P8
Na July 2018, na njedebe nke Key Stage 2, oke dị ka ndị a:
Bekee P1ii - P8
Maths P1ii - P7
Sayensị P1ii - P5
DfE School Perfomance Tebụl:
Nsonaazụ maka Oakleigh School & Acorn Assessment Center
N'ihi mkpa dị mgbagwoju anya nke ụmụ anyị ule ndị a (nke ezubere maka ụmụaka ndị bụ isi) enwechaghị ihe ọ bụla na ọganihu ha. Lọ akwụkwọ ahụ nwere usoro nyocha siri ike nke gosipụtara nsonaazụ dị mma na ọganiihu pụtara ìhè maka ụmụ akwụkwọ.